Google Translate ကို toolbar တွင် မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ - LifeBytes | LifeBytes
ကွန်ရက်များတွင် ကွန်ရက်များ | | ကွန်ယက်
Google Translate ကို toolbar တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ google Translator တွင်သုံးစွဲသူသန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး၎င်းသည်အသံ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်စာမျက်နှာများကိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်သည့်လုံးဝအခမဲ့ဘာသာစကားစုံစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းကအင်္ဂလိပ်လို (သို့) အခြားဘာသာစကားနဲ့သတင်းစာမျက်နှာတွေကိုအမြဲလိုလိုတွေ့နေရရင်ဘာသာပြန်သူကချက်ချင်းအသက်မဝင်ဘူး။ မင်းလိုချင်တဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ toolbar မှာထားဖို့နည်းလမ်းကိုငါတို့ပြမယ်.
1 Google Translate ကိုလွယ်ကူစွာထည့်သွင်းပါ
1.1 အဆင့် ၁ ။
1.2 အဆင့် ၁ ။
1.3 အဆင့် ၁ ။
1.4 အဆင့် ၁ ။
1.5 အဆင့် ၁ ။
2 စာမျက်နှာအားလုံးအတွက် Google Translate ကိုအလိုအလျောက်နေရာချပါ
Google Translate ကိုလွယ်ကူစွာထည့်သွင်းပါ
Google ဘာသာပြန်သူသည် Chrome Web Store တွင် extension တစ်ခုရှိသည်၎င်းကိုရယူရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျောက်ခဲဖြစ်သည်။
● ခြေလှမ်း 1.
Chrome ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင် Chrome ဝက်ဘ်စတိုး၏သင်္ကေတနှင့်နာမည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုကလစ်ပါ၊ ပင်မစာမျက်နှာ၌တည်ရှိသောနောက်ဆက်တွဲများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
● ခြေလှမ်း 2.
ဘယ်ဘက် panel ရှိ search engine သို့သွားပြီး Google Translate ဟုရိုက်ပါ။ မင်းရဲ့ရှာဖွေမှုပြီးသွားရင် google translate icon ကိုတွေ့လိမ့်မယ်၊ အဲဒါကိုကလစ်ပါ။
● ခြေလှမ်း 3.
Google Translate စာမျက်နှာအောက်ခြေသို့ရောက်သည်နှင့် extension သည်သင့်အားပေးသောအင်္ဂါရပ်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ မူဝါဒများနှင့်မူဝါဒနှင့်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများနှင့် Chrome သို့ထည့်ရန်ထိပ်ဆုံးရှိရွေးချယ်နိုင်သည်။
● ခြေလှမ်း 4.
Add to Chrome option ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် install လုပ်ခြင်း download ကိုချက်ချင်းစတင်နိုင်လိမ့်မည်။
● ခြေလှမ်း 5.
extension ကိုအောင်မြင်စွာတပ်ဆင်ပြီးကြောင်းအတည်ပြုရန် extensions folder ကိုသွားပါ.
စာမျက်နှာအားလုံးအတွက် Google Translate ကိုအလိုအလျောက်နေရာချပါ
extension ကိုသင်၏ browser ထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်အပေါ်ဘက် panel ၌ Google Translate icon ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်
အိုင်ကွန်ကိုကလစ်ရင်အဲဒါကိုတွေ့လိမ့်မယ် "ဘာသာပြန်ဆိုစာမျက်နှာ" ဟုရွေးစရာတစ်ခုရှိပါသည် ဒါကငါတို့လိုချင်တာဘဲ၊ ငါတို့ကမင်းကိုပိုကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုပေးမယ်။
Google Translate သင်္ကေတသို့သွားပြီး mouse ၏ညာဘက်ကိုနှိပ်ပါသင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြီးသည်နှင့် extension ၏ဖွဲ့စည်းမှုအပါအ ၀ င်ရွေးချယ်စရာစာရင်းငယ်တစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊ ထိုကိုနှိပ်ပါ။
Chrome ခေါင်းစဉ်ခွဲများအောက်ပါနှင့်အတူအကွက်ငယ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် အဲဒီမှာမင်းရဲ့အဓိကဘာသာစကား (စပိန်) ကိုရွေးပြီး save ကိုနှိပ်ပါ.
ဤအရာကိုပြုလုပ်ပြီးပါကသင်အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ် (သို့) တရုတ်ဘာသာမခွဲခြားဘဲသင်အလိုရှိသောစာမျက်နှာသို့သွားပါ။ သင်္ကေတကို နှိပ်၍ စာမျက်နှာကိုဘာသာပြန်ရန်ရွေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်စာမျက်နှာသို့အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်စရာမလိုပါ။ ထို့အတူစာသားကိုမူရင်းဘာသာစကားသို့နေရာပြန်ပြောင်းနိုင်သည်။
သံသယမရှိပဲ၊ ဒီ extension နဲ့သင်မြန်မြန်ဘာသာပြန်နိုင်သည် သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာမည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်မဆို web page
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » ကွန်ယက် » Google Translate ကို toolbar တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
Adblock ကိုဘယ်လိုအခမဲ့ download လုပ်မလဲ။
Google Chrome တွင် extension များမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။